Madax Waynaha Real Madrid Ee Florentino Perez Suuqa Bisha January Isha Ku Haya Toban Ciyaartoy Oo Ay Shan Ka Mid Ahi Ka Tirsan Yihiin Kooxaha Premier Leaque. – WWW.Gool24.net
Madax Waynaha Real Madrid Ee Florentino Perez Suuqa Bisha January Isha Ku Haya Toban Ciyaartoy Oo Ay Shan Ka Mid Ahi Ka Tirsan Yihiin Kooxaha Premier Leaque.
07/11/2017 Mahamoud Batalaale
Madaxweynaha Real Madrid Florentino Perez ayaa diyaar u ah inuu u soo dhaco Premier League bisha Janaayo iyadoo kooxda heysata koobka Champions League ay dooneyso inay adkeyso kooxdeeda.
Kooxda ku guuleysatay Champions League labadii sanno ee ugu danbeysay islamarkaana difaacaneysa koobka horyaalka La Liga ayaa sideed dhibcood ka danbeysa kooxda hogaamineysa horyaalka xilli ciyaareedkan ee Barcelona, waxaana si raaxo leh ku garaacday Tottenham kulankii Champions League ee isbuucii la soo dhaafay ka dhacay Wembley.
Waxaana ay taasi keentay in su’aal laga keeno tababare Zinedine Zidane iyo madaxda kooxda ka dib markii xagaagii ay kooxda ka tageen ciyaartoy waa weyn sida Pepe, James Rodriguez iyo Alvaro Morata.
Isagoo la hadlayay saxaafada ka dib guuldaradii Spurs, Cristiano Ronaldo ayaa yiri: “Ciyaartoyda inoo yimid waa kuwa mustaqbal leh laakiin Pepe, Morata iyo James waxa ay inaga dhigayeen kuwa xoogan, laakiin kuwa maanta jooga waa kuwa da’ yar.”
Madrid ayaa waxaa heysataa qaar ka mid ah xiddigaha mustaqbalka leh ee Spain oo ay ku jiraan Marco Asensio, Dani Ceballos iyo Marclos Llorente.
Laakiin kaliya Asensio ayaa wacdarro ka dhigaya Santiago Bernabeu xilli ciyaareedkaan iyo kii la soo dhaafayba.
Haatan madaxweynaha Real Madrid Perez ayaa doonaya inuu xoojiyo kooxda bisha Janaayo, iyadoo warbaahinta Diario Gol ay qortay inuu gacanta ku hayo liiska 10 ciyaaryahan oo uu lacag jaban ku heli karo.
Dhamaan 10ka ciyaaryahan oo shan ka mid ah ay ka ciyaaraan Premier League waxa uu qandaraaskooda dhacayaan dhamaantood dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Waxaa liiska hogaaminaya Alexis Sanchez, iyadoo weeraryahanka Arsenal uu qandaraaskiisa dhacayo dhamaadka xilli ciyaareedkan. Labada xiddig ee Man United Juan Mata iyo Ander Herrera ayaa iyagana ku jira liiska ciyaartoyda ay Real u dhaqaaqi karto bisha Janaayo, halka waayo araga Zlatan Ibrahimovic isna la xusay magaciisa.
Xiddiga khadka dhexe ee Liverpool Emre Can ayaa liiska ku jira si la mid ah xiddiga Schalke Leon Goretzka, daafaca Lazio Stefan de Vrij, goolhayaha Athletic Bilbao Kepa iyo labada xiddig ee Atletico Madrid Lucas Hernandez iyo Jose Gimenez.